Home Wararka Farmaajo oo ku fashilmay joojinta banaanbaxa AhluSunna & isaga oo loo awood...
Farmaajo oo ku fashilmay joojinta banaanbaxa AhluSunna & isaga oo loo awood sheegtay
Waxaa shalay ka dhacay magalaada Muqdisho banaanbax balaaran oo ay soo qaban-qaabiyeen ururka AhluSunna Wajameeca ee ku dhaqan magalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda. Banaanbaxaan ayaa looga soo horjeeday dagaalka ka dhanka ah Ururka AhluSunna ee ka dhacay Gobolada Dhexe.
Farmaajo oo istcimaalayo qaar kamida wasiiradiisa iyo ciidanka Nabadsugida ayaa isku dayay uu ka hortago banaanbaxaas, laakiin Ururka AhluSunna ayaa fartiin adag u diray Farmaajo iyaga oo u sheegay hadii uu isku dayo inuu ka hortago banaanbaxa ay isaga ugu gali doonaan xarunta Villa Soomaaliya.
Farmaajo oo aad uga bana awooda ururka AhluSunna, qaybtiisa Muqdisho, ayaa waxa uu soo diray wasiirkiisa Awqaafta kaas oo lacag u keenay AhluSunna laakiin madaxda AhluSunna waa ay ka diideen inay laaluush ka qaataan Farmaajo. Waxaa ayna ku adkeeysteen in banaanbaxa uu ku dhaco sida ay ayaga rabaan una qorsheeyeen.
Ururka AhluSunna ayaa awood balaaran ku leh deegaanka Magalaada Muqdisho. AhluSunna ayaa awood u leh in ay maalin kaliya soo saaran in ka badan 200,000 oo banaanbaxayaal ah. Farmaajo oo og awooda AhluSunna ayaa amray in aan la faragalin mudaaharaadka Uurrka AhluSunna. Waxa kaloo uu codsaday in uu kulan la qato madaxda AhluSunna laakiin lama oga in ay ay ogolaadeen kulankaas.
Banaanbixii shalay ayaa fartiin cad u diray Farmaajo, kaas oo ahaa in Ururka AhluSunna ay qaadi doonaan talaabooyin soo afjari doona awoodiisa hadii ku sii adkeeysato gumaadka culumada Ahlusunna. Farmaajo ayaa walwal xoog leh ka qaba awooda ururka AhluSunna ee gudaha dalka, gaar ahaan Muqdisho iyo nawaaxigeeda.